Murtii nageenyaaf iddoo kenne
Biyyoonni ollaa lamaan afaan, aadaafi duudhaalee walfakkaatoo biroo waliin qooddatan, Itoophiyaafi Eertiraan waggoota 27 darbaniif guutummaatti nagaa argatanii hinbeekan. Hanga har’aatti walqoccollaafi waldoorsisaa turaniiru.
Xiinxalootni siyaasaas haala kana guutummaaatti nagaas; waraanas miti jechuun ibsaa turaniiru. Kunimmoo sirna mootummaa biyyoota lameenii gidduutti garaagarummaa guddaa waan uumeef, lammiileen Itoophiyaafi Eertiraa barootaaf walirraa fagaachuuf dirqamaniiru.
Rakkoo kana furuuf Dhaabbanni Mootummoota Walta'anii (DhMW) yaaliiwwan adda addaa taasisaa turus milkaa’uu hindandeenye. Ejjennoon mootummoonni lameen abbummaa Baadimmeerratti agarsiisaa turan rakkinichi akka hinfuramneef danqaa ta'aa tureera.
Koreen raawwachiistuu hojii ADWUI murtii tibbana dabarseen garuu nageenya waaraa Itoophiyaa mirkaneessuufi imala haaromsaa eegalame qabatamaan milkeessuuf rakkoo biyya keessaafi alaa furuun murteessaa ta’uu ibsuun, dhimma kanaafi kanneen ciccimoofi ijoo gama siyaasaa, dinagdeefi hawaasummaatiin ibsamuu danda'anirratti gadifageenyaan mari'achuun murtii dabarseera.
Kanaanis murtiin korichi waaldhabdee daangaa Itiyoo-Eritiraa ilaalchisuun dabarseen daangaa biyyoota lamaanii waggoota dheeraaf furmaata malee taa'aa tureen gaaga’amni lubbuufi qabeenayarra qaqqabe daran olaanaa ta'uu eereera.
Loltoonni eegicha daangaarratti bobba'an lola qabbanaa'aa injifannoon gama lamaaniin hinargamne keessa taa’uun barasaanii fixaa turaniiru. Kanaan walqabatee bajanni olaanaan ramadames muka ija hinqabne ta’ee baroota lakkoofsiseera.
Rakkoo daangaa Eertiraa waliin jiru furuun hariiroo biyyoota lamaanii cimsuu keessatti shoora olaanaa kan taphatu waan ta’eef, waliigalteen Aljersi hojiirra akka ooluuf murtee koreen raawwachiistuu hojii ADWUI dabarse kanneen nageenyaafi guddina Itoophiyaa hawwaniif gammachuu guddaadha.
Korichi waliigalteen Aljersi Baadimmeen kan Eertiraa ta’uu murteesseefi daangaarratti murtee komishinii DhMW dhimma daangaa biyyootaarratti hojjetuun waggoota digdama dura murteeffame guutummaatti fudhatee hojiirra oolchuuf murteesseera.
Murtichi ejjennoo nageenya amansiisaafi qabatamaa taasisuufi waliigaltee Aljersi kabajuu waan ta’eef, Itoophiyaaf kabaja kan argamsiisudhas.
Murtichi nageenyaaf iddoo kennuun tasgabbii biyyaa qabatamaan mirkaneessuufi guddina si’ataa itti fufsiisuuf hudhaalee biyya keessaafi alaa mudatan karaa bilchina siyaasaa qabuun furaa deemuun ammayyummaa waan ta’eef kan jajjabeeffamuudha.
Torban kana/This_Week 8351
Guyyaa mara/All_Days 1817771